Waxaan u guuray Minnesota nin. Anigana waxaan uga soo tagay ninkayga Detroit (ku meel gaar ah). Tani waxay u muuqan kartaa sidii inaan ka soo horjeeday anshaxdayda iyo mabaadi'da dheddigga - laakiin ma aanan yeelin.
Waxaan halkan u soo guuray maxaa yeelay George Floyd, oo ah ninka, ayaa astaan u ahaa dhaqdhaqaaqa. ” —TONYA ALLEN, MADAXWEYNE
Dhaqdhaqaaqa Nolosha Madoow, ee dib loogu soo kiciyey dilkii Floyd iyo dhaqdhaqaaqayaasha Minneapolis, ayaa sababay malaayiin dad jinsiyo kala duwan leh, oo u badan dhalinyaro ku mudaaharaadayay waddooyinka in ka badan 2,000 magaalo oo ku yaal 60 dal muddo bilo ah. Waxay ahaayeen kuwo aan kala joogsi lahayn oo waxay ahaayeen geesinimo. Waxay naga dhigeen ogeysiis, waxay naga dhigeen kuwa aan raaxo lahayn, waxayna naga dhigeen inaan dhaqaaqno. Waxay iga dhigeen - sida kuwa kale oo badan oo dalka oo dhan ah - la yaab, "Sidee wax badan u qaban karaa?" iyo "Sideen ku hubin karaa in markan isbeddelkiisu raagayo?" Raadinta jawaabaha su'aalahan waxay igala wareegeen — si maldahan iyo macno ahaan - noloshaydii raaxada, hadana macnaha ku jirtay Detroit. Hakadkii rabbaaniga ahaa ayaa i galiyay halkan magaalo cusub, shaqo cusub, guri cusub, iyo hadaf cusub.
Hadafka McKnight Foundation - si loo hormariyo mustaqbal aad u cadaalad badan, hal abuur leh, iyo mustaqbal aad u tiro badan oo dadka iyo meerahu ku barwaaqoobaan-waxaa lagu guuleysan karaa oo keliya haddii aan bartamaha sinaanta jinsiga ka hirgalino dhaqamada, siyaasadaha, iyo nidaamyada aargudashada ah. Siyaasadaha noocan oo kale ah ayaa u oggolaan lahaa riyada George Floyd in la rumeeyo halkii laga cabbiri lahaa laamiga adag ee 38th St. iyo Chicago Ave.
Sida inbadan oo idinka mid ah, waxaan aaday isgoyskaas, oo hadda loogu magac daray George Floyd Square, marar badan. Waxaan bixiyay xushmadayda, waxaan ku dhexjiray bulshada dhexdeeda, waxaan xasuustay geesinimadii 17-sano jir sawir qaade Darnella Frazier. Waxay layaabi kartaa dadka qaar inaan ogahay magaceeda wali waligeyna daawan muuqaalkeeda. Uma baahnin inaan arko muuqaaladeeda si aan u ogaado waxa dhacay. Nasiib darrose, waxaan arkay sawirro igu filan oo aan maqlay sheekooyin ku filan oo ku saabsan dadka Madow oo ay dileen booliska qandhada leh ama natiijada ka dhalatay rabshadaha socda ama cunsuriyadda aan loo dulqaadan karin ee ka jirta beesheena. Uma baahnin inaan daawado fiidiyowga George Floyd si ay iigu soo dhacdo.
Anigoo ah Haweeney Madow ah, waxaan ogaaday in aqoonta naxariis darada ah ee geerida George Floyd - oo aan ahayn muuqaalka - ay igu filan tahay inay kaligey isoo dhaqaajiso, hase ahaatee kala-guurkeygu wuxuu ahaa mid aad u badan. Jawaabtaydu waxay ku saabsanayd magacyada tirada badan ee aan akhrinayno - Breonna, Ahmaud, Duante, Sandra, Philando, iyo Trayvon - ee ku saabsan “magaca ama magaceeda.” Waxay ku saabsanayd ragga qoyskayga ah iyo asxaabteyda oo ka sheekeeya, mararka qaar tobanaan sano kadib, iyagoo ilmadu indhahooda ka muuqato, bahdilaadda iyo naxdinta leh ee ay joojiyeen iyo weerarada ay geysteen askarta booliiska ee masayrka badan. Waxay ku saabsan tahay carruurta aan waxba galabsan ee lagu toogtay Minneapolis - Ladavionne, Trinity, iyo Aniya — waxayna ku saabsan tahay dambiilayaashii sida xun u jilaya xanuunkooda, taasoo ka dhalatay fursad yar, xasilooni, iyo shaqooyin la'aan. Waxay ku saabsan tahay tirada aan dheellitirka lahayn ee ragga iyo dumarka Madowga ah ee dhintay taas oo caddaynaysa in waddanku leeyahay kala sarrayn xagga qiimaha aadanaha. Xanuunkaas ku xannibmay DNA-kayga - oo u sii gudbay jiilal ka mid ah qoysaska Madow - waa mid ceyriin ah oo culus maxaa yeelay waligeen kuma xisaabtamin cunsuriyadda ku duugan ee u baahan in qaarkeen naga mid ah ay qaadaan culeyska dembiyada culus ee dalkeenna.
Haddii aad daawatay fiidiyowga George Floyd iyo in kale, waxaan rabaa inay adiga sidoo kale ku soo dhacdo. Waxaan rabaa inay sii wado inay si uun kuu guurto - haddii aanaan u guurin magaalo ama magaalo cusub, ka dib bulshadaada dhexdeeda. Ay ku dhaqaajiso waxa lagu xukumay. Noqo mid aan naxariis lahayn ficiladaada.
Midkeenna ma awoodo inuu raaxeysto - midkeenna ma aha - maxaa yeelay dadnimadeenna iyo dimuqraadiyaddeennu khatar bay ku jiraan. —TONYA ALLEN, MADAXWEYNE
Kuweena awoodda iyo mudnaanta lihi waa inay sida ugu badan qabtaan. Haddii aad awood leedahay, dib u qor sharciyada meesha iyo goorta aad awoodid. Waxaan xasuusinayaa Qorniinka kitaabiga ah "kan wax badan la siiyay, wax badan baa loo baahan yahay."
Jid dheer oo cadaaladeed baa inna hortaala. Waxay nooga baahan tahay inaan noqnoqon, geesinimo, iyo dhib la'aan, kaliya maahan sanad guuradii dhimashadii Floyd, laakiin maalin kasta.
Waa inaan iska xoojino dib u soo celinta ka socota horumarka uu dalkeenu taariikh ahaan taageeray. Taariikhda ayaa ina tusinaysa in toddobadii sano ee kasta ama wixii ka dambeeya horumarka xagga jinsiyadda, waddankeennu uu dib u socdo. Waxaan waxyeeleynaa kuwa ugu nugul waxayna la kulmaan dib u dhac weyn. Mar dambe ma sameyn karno taas. Maanta iyo maalin kasta waa inaan u dagaallannaa berrito, si aan u sii wadno dhaqdhaqaaqa, bogsashada, iyo la dagaallanka jidkeenna xagga hore ee Ameerika.
Sawir waxaa qaaday Justin W. Milhouse
Xafiiskeyga cusub ee McKnight, waxaan ku hayaa sawir wiilal Madoow ah oo qoslaya farxadna ka buuxo. Waan jeclahay sawirkan maxaa yeelay waa xusuusin joogto ah in wiilasha Madow - sida dadka kale oo dhamiba - u qalmaan carruurnimo sidoo kale. Waxaan rabaa inay la kulmaan koritaanka iyaga oo aan ilaalo ka haynin dadka waaweyn iyo saraakiisha booliiska ee xaafaddooda. Waxaan rabaa inay helaan xorriyad ay nolosha ku soo marsadaan iyagoon adduunyada ka ilaalin. Taasi waa waxa aan u rajeynayo dhamaan reer Minnesota. Taasi waa waxa George iyo Philando iyo Jamal iyo Daunte u qalmeen. Taasina waa ta nagu dhiirrigelinaysa inaan beddelno nidaamyada aan sii shaqeynayn, oo aan tirtirno kuwa aan weligood shaqeyn.
Iyada oo la helo taakuleyn iyo nidaam sax ah, waxaan abuuri karnaa bulshooyin qof kasta kor u qaada. Waxaan u soo guuray Minnesota maxaa yeelay waxaan aaminsanahay in isbadalkan uu marka hore halkan ka dhici karo. Mu'asasada McKnight ayaa sidoo kale aaminsan tan. Waxaan rajaynayaa inaad u guurtay inaad tan oo kale ka dhigto.
Qormadani waa tii ugu horreysay ee a taxane ah milicsiga qofka-koowaad asxaabteena waxay wadaagayaan George Floyd iyo dhaq dhaqaaqa cadaalada.